Mutoro Wemitemo | Law & More B.V.
Mhosva Gweta » Zvikumbiro zvekukuvadza
Pamusoro pezvo, mutoro weimwe bato haugone kutorwa sehusina basa, tichitarisa musimboti werusununguko rwechibvumirano. Mushure mezvose, mapato muNetherlands ane rusununguko rukuru rwechibvumirano. Izvi zvinoreva kuti mapato anobata chibvumirano akasunungukawo kusabvumidza kuzvidavirira. Izvi zvinowanzoitwa muchibvumirano chaicho kana mumazita akajairwa uye nemamiriro ezvinhu akaziviswa anoshanda kwairi kuburikidza ne kufananidzira mutemo. Chisungo chakadaro chinofanirwa, zvisinei, kusangana nemimwe mamiriro ezvinhu bato risati rauya kuti rive nemhosva. Kana chirevo chakadaro chiripo muhukama hwehukama uye chosangana nemamiriro ezvinhu, nzvimbo yekutanga inoshanda.
Semuenzaniso, maitiro kana chiitiko chemumwe munhu chinofanira kutanga kutanga kutorwa senge zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mhaka kana chiitiko ichi chichibatanidza kukanganiswa kwerimwe kodzero kana chiito kana kusiyiwa mukupesana nebasa repamutemo kana kushushikana munharaunda, kana maitiro asina kunyorwa. Uyezve, chiitiko chinofanira kunge chiri zvinoratidzwa ne iye 'mutadzi'. Izvi zvinogoneka kana zvichikonzerwa nekukanganisa kwake kana chikonzero chaari kuitirwa nemutemo kana mumugwagwa. Chinangwa hachidiwe mumamiriro ekuzvidavirira. Chikwereti chidiki kwazvo chinogona kukwana.
Nekudaro, iko kukanganiswa kwekutyora muyero hakuwanzo kutungamira kune mutoro kune chero munhu anotambura kukuvara semhedzisiro. Mushure mezvose, kuve nemhosva kunogona kuramba kuchikiswa na zvinodiwa zvehukama. Ichi chinodikanwa chinotaura kuti hapana chisungo chekubhadhara muripo kana chiyero chakatyorwa chikasashanda kudzivirira kubva kukuvara kwakatambudzwa nemunhu anenge akuvadzwa. Saka zvakakosha kuti iye 'mupari wemhosva' akaita zvisirizvo 'kune' akabatwa nekuda kwekutyorwa kweyakaenzana.
Uyezve, kukuvara hakuzogara kuchingobhadharwa zvakakwana. Culpable hunhu hweiye akabatwa iye kana mamiriro munzvimbo yengozi yeiye akabatwa anoita basa rakakosha mune izvi. Mubvunzo uyo unofanirwa kubvunzwa unotevera: waakabirwa angangoita zvakasiyana here nezvaakaita nezvekuitika kana huwandu hwekukuvara? Mune zvimwe zviitiko, munhu akabatwa angamanikidzwa kudzikisira kukuvara. Izvi zvinosanganisira mamiriro ezvinhu ekuve nemagetsi anodzima moto pamberi pechiitiko chinokuvadza, senge moto, chakaitika. Pane chero mhosva pane irwo here rwewakabatwa? Kana zvakadaro, maitiro anokanganisa zvichitungamira kudzikisira mubhadharo wekusungirwa kwemunhu ari kukonzera kukuvara uye kukuvara kunofanira kuve kwakakamurwa pakati pemunhu ari kukonzera kukanganisa neiye akuvadzwa. Mune mamwe mazwi: (hombe) chikamu chekukuvara chinosara pamubhadharo wemunhu akuvara. Kunze kwekunge nyajambwa ave neinishuwarenzi nezvazvo.